Iincwadi ezahlukeneyo zabathandi bobuchule | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iincwadi ezahlukeneyo zabathandi bobuchule bobuchule abafuna ukukhulula eyabo ukucinga kwaye uzicwilise kwi ihlabathi lokudala, ezintsha kunye ezahlukeneyo endiyifumanayo phuhlisa ubuchule bakho bobuqu ngendlela yokonwabisa. Phuhlisa ingcinga yethu ukudlala nokuzama yeyona ndlela yokuqeqesha iingqondo zethu ngenxa yokusebenzisa iincwadi ezinqabileyo nezingaqhelekanga oko kuyakwenza ukuba senze zonke iintlobo zemisebenzi ephambeneyo.
Njengokuba yayingumdlalo wabantwana, ezi ncwadi zoyilo ziya kusenza buyela ebuntwaneni bethu kwaye senze zonke iintlobo zezinto ngaphandle koloyiko lokuba iimeko kuthi ngendlela eya kuthi ibenakho ukuziphucula size sifumane izinto ebesingazazi okanye ebesingafuni ukuzibona. Ezi ncwadi zoyilo ziya kukwenza ungene kwihlabathi yahlukile, iyonwabisa kwaye iyalinga kakhulu.
1 Smash eli phephancwadi
2 Ikholaji yobomi bakho
Smash eli phephancwadi
Incwadi yokuqala eyahlukileyo esiya kuyibona iyasivavanya ngokusinyanzela yenza zonke iintlobo zovavanyo lomzimba nolwengqondo ezinye i-crazier kunabanye. Incwadi ibizwa ngokuba Smash eli phephancwadi kwaye ibandakanya umntu wemihla ngemihlal sele ibhaliwe ngobungqina bazo zonke iintlobo ukuba bayasinyanzela ukuba sinxibelelane naye ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo, yidayari esiyalela ukuba senze izinto. Ndinayo ekhaya iminyaka embalwa kwaye ngaphandle kwamathandabuzo kunjalo enye yeencwadi ezilungileyo zokuyila ukuba andikaze ndibabone kokubini kumxholo nakwingcamango yayo njengeprojekthi, kuyonwabisa kakhulu kubantu abadala nakubantwana. Yi Isipho esigqibeleleyo ngale Krisimesi!
Ngaphakathi sinokufumana Zonke iintlobo zezenzo abanye bagxothiwe njengale siyibona phezulu esixelela ukuba sibeke idayari kwishower ... le yenye yezona zinto sizibophelelayo nezinqabileyo esinokuzifumana ... okanye singafumana abanye izenzo craziest.
En Internet singafumana iividiyo zabasebenzisi abafundisa kwaye batshabalalisa idayari yabo kwangaxeshanye bakuchazela ukuba luhlobo luni lwejenali yokudala.
Yiyo Flip kwingcinga yakho yejenali ukuba sonke siyazi kodwa ngokwembono ngakumbi ubugcisa kunye nokuyila. Incwadi inokufumaneka nakweyiphi na ivenkile yeencwadi okanye kwi bomvu.
El i collage yobomi bakho
El i collage bobomi bakho zezi zilandelayo incwadi yoyilo eyahlukileyo sizobona ntoni kulento isikhundla ufuna ukusibonisa ntoni indlela eyahlukileyo yokusikhuthaza ukushiya bucala isikrini kancinci kwaye ugxile kwifomathi encinci yencwadi.
Le ncwadi inyanzela ukuba phendula imibuzo malunga nazo zonke iintlobo zemicimbi yobuqu ngendlela eyahlukileyo eshiya ecaleni ukubhala kwaye usiya kumfanekiso ocacileyo kunye noyilo loyilo: ubuchule i collage. Obu buchule buyile kakhulu kwaye buphelele ekuchazeni iikhonsepthi zazo zonke iintlobo ze indlela eyonwabisayo kunye nentsusa.
Ukuba unomdla okanye unomdla kubuchule i collage le ncwadi ikulungele kuba iyakukunyanzela phendula imibuzo ngobomi bakho kusebenzisa kuphela obu buchule ukufikelela kwi Iziphumo ezibonakalayo zinomtsalane kakhulu. Yincwadi ilungele abantwana kuba inyanzela ukuba basebenze ngezandla zabo ngelixa bonwabile kwaye bekhulisa ubuchule babo.
Ungasebenzisa zonke iintlobo zezinto ezibonakalayo: iimagazini, iincwadana, iifoto ... njl yonke into inokwenzeka kule ncwadi indlela yakho yobomi i collage. Ungayifumana incwadi kuyo nayiphi na ivenkile yeencwadi okanye kwi ehleliwe.
Inkqubo i collage Yindlela eshwankathela ukudala iingoma kusetyenziswa iindawo ezenza itotali, le yinto inxulumene nembono yobomi: iindawo ezininzi kunye nemizuzu eyenza iyonke, ubomi bethu. Ukuba ungumculi, utata / umama onabantwana bokuyila okanye unomdla kwezi zihloko, ngekhe uyiphose le ncwadi Iya kukuxhuma ukusuka ngomhla wokuqala ukuya kumhla wokugqibela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iincwadi ezahlukeneyo zabathandi bobuchule bobuchule
Nantsi indlela abantu abayi-156 abazobe ngayo iilogo zodumo kwimemori